Ny tsy tao anaty feuille de match indray izany no nilalao, fa ny andrarezina buteur ry Njeva tsy tao? Sa nahazo karatra mena, sa niala an-daharana sa natahotra mpaka sary? Azavao kely hoe ry kapiteny Ntsay? Ary Tromlin koa toa tsy natao tanaty resaka, sa efa nilamina ny momba an'iny misy solika sy gaz marobe iny? Ho any Paris aninona? Angaha mbola averina indray ny fitsarana nataon'ny ONU? Efa didy mivoaka, fampiharana didim-pitsarana sisa no atao, tian-kano, tsy tian-kano, any amin'ny ONU izy no mitaraina raha mbola tsy tapitra ny lalana, fa ny resaka zao dia oviana isika no andeha any hametraka ny sainam-pirenentsika, ka hilaza ny Filoha hoe " Eto dia Madagasikara".
Miisa folo, miampy 02, ireo mpikambana ao amin’ny vaomiera iraisan’i Madagasikara sy Frantsa manao ny drafitra ny amin’ireo Nosy Malagasy. Manana mpikambana dimy miampy 01 i Madagasikara ary Frantsa manana 05, miampy ny ambasadoro frantsay maha 06 ny azy. Ho an’i Madagasikara dia ahitana an’i 1-Christian Ntsay, Praiminisitra lehiben’ny Governemanta, izay mitarika ny delegasiona,2-Profesora Raymond Ranjeva, mpahay lalàna isan’ny nandray anjara tamin’ny dinika tany amin’ny Firenena Mikambana,3-Vice-Amiral Ranaivoseheno Louis Antoine de Pädoue, Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena,4-Capitaine de Vaisseau Randrianantenaina Jean Edmond, tale Jeneralin’ny APMF,5-Dr Tehindrazanarivelo Djacoba Liva, mpampianatra lalàna iraisam-pirenena, ny lalàna afrikana any amin’ny Oniversite ny Suisse, izay efa nandray anjara tamin’ny famahana ireo olana maro taty Afrika. Miampy an-dRatsimbazafy Soloherinaina Eric, « Chargé d'études et coordinateur du Centre d'études et d'analyses stratégiques » eo anivon’ny ministeran’ny raharaham-bahiny. Tsy tao anaty lisitr’ireo anarana navoaka tamin’ny Filankevitry ny minisitra tamin’ny alarobia ny anaran’ity farany.
Nioty isa telo i Madagasikara taorian’ny fandresena 1 noho 0 azony teo amin’ny Kianja monisipaly Mahamasina, nanoloana an’i Etiopia. Feno hipoka ny kianja, iray andro mialohan’ny lalao rahateo dia efa tapitra avokoa ny tapakila. Anisan’ireo tonga nanotrona sy nanohana ny Barea an’i Madagasikara ny sasany tamin’ireo kandida Ben’ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra, Rina Randriamasinoro (TIM), Rakotoarisoa Faniry Alban (APM), Naina Andriantsitohaina (IRK). (Jereo Sary Tohiny)
Karnavaly amin’ny fiara hitety an’Antananarivo Renivohitra no hanohizan’ny kandida Ben’ny tanàna an'Antananarivo Renivohitra, mitondra ny laharana faha 2 amin'ny bileta tokana, Rina Randriamasinoro ny tolakandron’ny alahady 17 novambra, sady hamaranana ity herinandro faharoa amin’ny fampielezan-kevitra ity, ka hanomanana ny herinandro farany mialoha ny latsa-bato amin’ny fifidianana hatao amin’ny 27 novambra 2019. Ny asabotsy 17 novambra dia nitety Fokontany maromaro tao amin’ny Boriborintany fahadimy eto Antananarivo Renivohitra ny kandida Rina Randriamasinoro, ny tapakandro maraina. Vonona ny hampandroso ny tanàna isika, ary tetikasa mipaka amin’ny vahoaka sy azo tanterahina avy hatrany no arosoko, hoy izy tamin’ireo mponina nihaona nivantana taminy.
Nihaona tamin’ireo tompon’andraikitry ny fandriampahalemana manerana ny Nosy (OMC national), ny Praiminisitra Ntsay Christian, ny zoma 15 novambra, teny amin’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny Anosy. Fivoriana izay nijerena manokana ny fiomanana amin’ny fanatontosana ny fifidianana Ben’ny tanàna sy ny mpikambana eo anivon’ny filankevitra kaominaly na monisipaly, izay hotanterahina amin’ny 27 novambra 2019 ho avy izao. Nandray anjara tamin’ity fihaonana ity ny minisitry Ati-tany Razafimahefa Tianarivelo, ity farany izay tratry ny tsy fahasalamana tampoka, naratra vokatry ny fianjerana avy eny amin’ny « tribune » raha nijery baolina tao amin’ny kianja monisipalin’Ambatolampy-Vakinankaratra ny alahady 3 novambra 2019. Nalefa avy hatrany notsaboina tatsy amin’ny nosy La Réunion izy ny harivan’io andro nahavoa azy io, avy eo nanohy ny fitsaboana tao amin’ny Polyclinique Ilafy-Antananarivo.
Nazahoan'ny Tiako I Madagasikara (TIM) porofo ny endrika fanodinkodinana safidim-bahoaka kasain’ny sasany hatao indray amin'ny fifidianana Ben'ny tanàna sy mpanolotsaina hotanterahina amin’ny 27 novambra 2019. Misy ny fanabontsinana lisi-pifidianana, hoy ireo solombavam-bahoaka Tiako i Madagasikara miisa enina mianadahy voafidy teto Antananarivo Renivohitra nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’izy ireo tao amin’ny hotely Colbert Antaninarenina, omaly. Tao amina Biraom-pifidianana iray dia 520 ny isan'ny mpifidy ao aminy taorian'ny fikatonan'ny lisi-pifidianana tamin’ny volana mey 2019. Rehefa nanao "fanamarinana" farany ny Tiako i Madagasikara dia hita fa nitombo ho 675 ny isan'ny mpifidy nefa tsy nisy intsony fanokafana ny lisi-pifidianana.
mercredi, 13 novembre 2019 13:49
Antenimierandoholona: Mangarahara ny fitantanam-bola
Nankatoavina ny talata 12 novambra 2019 tao amin’ny Lapan’Anosikely, nandritra ny fivoriana azon’ny besinimaro natrehina, ny tatitra ara- bolan’ny Antenimierandoholona taona 2018, izay natolotry ny Kestora voalohan’ny Antenimierandoholona, Abdirassoul Mourad. Fampahafantarana ny fitantanana ny tetibolan’ny Antenimierandoholona teo anoloan’ireo Loholon’i Madagasikara sy ny mpiaramiasa rehetra. Araka ny andininy faha 19, an-dalana faha efatra, amin’ny fitsipika anaty mifehy ity Andrimpanjakana ity, dia isaky ny fiandohan’ny fivoriana ara-potoana voalohany, dia tokony hanolotra ny tatitra ara-bola ny taona efa lasa ny Kestora Voalohany, manoloana ny asam-baomiera, ary hakana fankatoavana na tsia eo anatrehan’ny Loholona rehetra amin’ny alalan’ny fivoriana azon’ny besinimaro atrehina.
mercredi, 13 novembre 2019 12:56
Rina Randriamasinoro: Ambiansy ny fandalovany tao amin’ny Boriborintany faha-3
Nitohy tao amin’ny Boriborintany faha-3 ny fihaonana mivantana nataon’ny kandida Ben’ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra, mitondra ny laharana faha 2 amin'ny bileta tokana, Rina Randriamasinoro tamin’ny vahoaka omaly talata 12 novambra, andro faha-8 amin’ny fampielezankevitra amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna. Ambiansy tamin’ireo toerana rehetra notsidihiny. Nampiato kely ny asany ny sasany, nifampitafana mivantana tamin’i Rina, ny hafa tsy nanaiky raha tsy niara-naka sary. Efa hainao ny zava-misy ety, fa dia ny fanombohan’ny asa sisa andrasana aminao rehefa tonga ao amin’ny Lapan’ny tanàna, hoy ny maro.
lundi, 11 novembre 2019 20:42
Rina Randriamasinoro: Nitohy ny fihaonany amin’ny mponina eny anivon’ny Fokontany
Teny amin’iny Boriborintany faha-2, faritra Ambohitsoa iny ny kandida Ben’ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra, Rina Randriamasinoro, mitondra ny laharana faha 2 amin'ny bileta tokana, no nanohy ny fampielezan-keviny androany tapak’andro maraina nitety tanàna, nifanakalo hevitra nivantana tamin’ny mponina sy nijery ny zava-misy, indrindra ny foto-drafitrasa ilain'ny mponina. Efa vonona ny vahaolana manoloana ny hetahetan’ny mponina, ary azo tanterahina tsara fa tsy nofinofy. Hiasa avy hatrany isika vao tonga ao amin’ny Lapan’ny tanàna, hoy ity kandida ity. Nanotrona azy ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara, Marc Ravalomanana sy ny solombavam-bahoaka Rakotonirina Stanislas na Rastany voafidy tao amin’ny Boriborintany faha-2 sy ireo kandida amin’ny lisitra Mpanolontsaina an’ny Tiako i Madagasikara. (Jereo Sary Tohiny)
Miparitaka eny amin’ny tambazotra sosialy Facebook sy Youtube ireo « clip » na horonantsary fanentanana ataon’ny kandida Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina, hifidy azy ireo. Misy amin’ireo « clip » propagandy no ahitana sary lanonana fitokanana zava-bita, misy sarina olom-panjakana. Hita mibaribary izany ao amin’ny « clip » an’i Andriantomanga Mokhtar Salim, ity farany izay kandida Ben’ny tanàna ao amin’ny Kaominina ambonivohitra Mahajanga, avy amin’ny IRK ivondron’ireo antoko manohana fitondrana. Misy sarin’ny Prefen’i Mahajanga sy lehiben’ny Faritra mpisolo toerana ao anaty « clip ». Mbola ahitana sarina miaramila sy solontenan’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ihany koa. Mpanohana ny kandidan’ny IRK ve no nampidirana ny sarin’ireo solontenam-panjakana ireto ao anaty « clip » sa efa nahazo fahazoan-dalana ho amin’izany.